MACLUUMAADKA IYO SAWIRADA TARANKA EEYAHA STAGHOUND - EEYAHA
Macluumaadka iyo Sawirada Taranka Eeyaha Staghound
Tusaale 'shag' Staghound, sawir qadarin leh Running Sage Staghounds
Staghound Mareykan ah
Staghound-ka Mareykanka looma aqoonsana inuu yahay nooc, laakiin waa nooc indho-indheyn ah oo loo adeegsado in lagu dabagalo (dabcan) noocyo kala duwan oo dhagax-jeex ah (ciyaar). In kasta oo aan loo aqoonsanayn inuu yahay nooc, haddana 'khadadka' qaarkood ayaa la isla soo saaray in ka badan qaar ka mid ah noocyada casriga ah ee la aqoonsan yahay. Habka ugu wanaagsan ee lagu arki karo Staghound-ka Mareykanka waa in la isku daro astaamaha Scottish Deerhound iyo Greyhound. Kani waa eey socda oo leh astaamo jireed oo lagu tilmaami doono nooca 'Greyhound prototype'. Waxay leedahay lugo dhaadheer, xabadka oo qoto dheer iyo muruqyo adag. Staghound wuxuu leeyahay indho indheyn weyn, qaarna waxaa loo soo saaray xoogaa xoog ur ah inta ay socdaan. Waxaa laga heli karaa nooc kasta oo midab ama qaabab midabyo ah oo laga heli karo Greyhound iyo Scottish Deerhound. Waxaa jira seddex nooc oo jaakad ah: 'shag', oo si aad ah ugu eg Scottish Deerhound 'slick,' oo aad ugu eg Greyhound iyo 'jaban', oo u dhexeeya labada. Staghound-ka Mareykanka wuxuu leeyahay dhammaan astaamaha jireed iyo maskaxeed ee looga baahan yahay inuu hoos u dhigo dhagaxiisa. Waxaa loo yaqaanaa inuu leeyahay xawaare ku dhowaad tii Greyhound, laakiin si ka duwan Greyhound, tijaabooyinka qaarkood waxay leeyihiin adkeysi aan caadi aheyn.
Staghound waa mid deggan guriga agtiisa. Waxay jeceshahay dareenka aadanaha waana mid aad u jecel milkiilaha. In kasta oo eeygan marka hore loo adeegsado kalluumeysiga qodista, Staghound-ka Mareykanka wuxuu sameeyaa wehel la yaab leh. Sanadihii la soo dhaafay waxaa muuqata xiisaha badan ee Staghound oo ah xayawaan ahaan. Way ku fiican tahay carruurta, laakiin cabirkiisu wuxuu dhibaato ku keeni karaa dhallinyarada. Staghound badankood waa ilaaliyeyaal cajiib ah aragtooda fiican darteed, laakiin ma ahan ilaaliyeyaal ama ilaalin. Staghounds waa kuwo aad u dhakhso badan laakiin ma ahan kuwo la buunbuuniyo. Dadka qaarkiis Staghound xitaa waxay umuuqataa inuu xoogaa caajis ku yahay guriga mar haduu bislaado. Dareenka maskaxeed ee Staghound-ka Mareykanka waa mid aan la dhaafi karin, sidaas darteed wax kasta oo soconaya waxaa loo qaadan karaa dhagax-tuur. Berrinka eeygan waa geesinimo, adkaysi badan oo aad u go'aamiya inuu wax ka barto a bakayle deero Staghound ayaa u janjeedha dhanka u janjeedha sidaa darteed waxa laga yaabaa inay aqbasho eeyaha kale ee uu garanayo, laakiin xayawaannada sida bisaduhu waa caqabad aan weligood laga adkaan karin, hase yeeshee Staghounds kale ayaa si farxad leh ula nool bisadaha. Staghounds taariikhda oo dhan waxaa loo soo saaray hal ujeedo, IN LAGU DAADO! Kaliya ugaarsadayaasha ugu fiican ayaa la soo saaray, sidaa darteed xitaa eeyaha yaryar ee guriga lagu koriyay waxay isu rogaan dareen ugaarsi ugaarsi aad u xoog badan. Inta badan Staghounds waxaa loo isticmaalaa ugaarsiga ugaarsadayaasha, looma isticmaalo ugaarsi. Halkii ay ugaarsan lahaayeen wax sida bakayle aan dib ula dagaalami doonin markii la qabto, waxay si dabiici ah u ugaarsadaan wax u eg coyote oo u dhaqanta sida bahal duurjoog ah markii la qabto. Waa inay afka ka xidhaan marka aan la ilaalin ama xadhiga laga sii wadayo. Waxay u baahan yihiin qalin gaar ah oo ka reeba xayawaannada kale marka mulkiiluhu uusan awoodin inuu kormeero. Ujeedada tababarka eeygan ayaa ah gaaro heerka hogaamiyaha xirmada . Waa dareen dabiici ah eey ey leedahay ku dalbo baakadeeda . Markaan aadane la noolaano eeyaha, waxaan noqonaa xirmadooda. Xirmada oo dhan waxay lashaqeysaa hal hogaamiye. Khadadka si cad ayaa loo qeexaa. Adiga iyo aadamaha oo dhan WAA INAAD uga sarraysiisaan sida eyga. Taasi waa sida kaliya ee xiriirkaagu u noqon karo mid guuleysta.
goormay tahay in eey la jabaan guriga
Dhererka: Ragga 26 - 32 inji (66 - 81 cm) Dumarka 24 - 29 inji (61 - 74 cm)
Miisaanka: Ragga 55 - 90 rodol (25 - 41 kg) Dumarka 45 - 85 rodol (20 - 39 kg)
Ma jiraan dhibaatooyin caafimaad oo hidde ahaan loo yaqaan. In lagu abtirsado jiilal aan tiro lahayn oo shaqeynaya, Staghound American waa mid aad u caafimaad qaba. Sababtoo ah boqolkiiba hoose ee dufanka jirka iyo saamiga muruqyada, Staghound wuxuu u nugul yahay suuxdinta. Waa in aan la socodsiinin ka dib marka la cuno qayb weyn oo cuntada ah daaq darrada awgeed walaac buunshaha .
Maaha eey dabaq ah, laakiin wuxuu ku fiicnaan karaa meel magaalo ah haddii la siiyo waqti uu ku jimicsado deyrka deyrka ku jira ama lagu socdo. Ku habboon meelaha miyiga ah. Noocyada kala duwan ee shaggu waxay la jaan qaadi karaan xaaladaha jiilaalka ee adag, halka qiiqku u baahan yahay fiiro gaar ah inta lagu jiro xilliga qaboobaha. Badankood waxaa lagu hayaa banaanka, laakiin dhammaantood waxay doorbidaan raaxada nolosha guriga.
Staghound wuxuu u baahan yahay jimicsi maalinle ah si uu u bislaado jir ahaan iyo maskax ahaanba. Waxay ku nooshahay in la ordo waana inay lahaataa meel si bilaash ah loogu ordo. Staghound wuxuu saaxiib fiican u noqon lahaa qofka ku orda ama ku kaxeeya baaskiil inta badan, isagoo u maleynaya inuu eeygu ka badan yahay 12 bilood. Ha ku mashquulin eeyaha 12 bilood iyo wixii ka hooseeya maadaama ay lafahoodu weli soo korayaan. Xidhmo xirmo maalinle ah waa lagama maarmaan in lagu qanciyo dareenka qashin-qub kasta.
12-14 sano ama ka badan haddii si habboon loo daryeelo. Run, sheeko la xaqiijiyey oo ka mid ah Staghound gaar ah ayaa sheegeysa in labku laba weel ka weyn yahay isagoo jira 16 sano!
irish wolfhound dane weyn oo isku dhaji eeyo yaryar oo iib ah
Kaliya cadayasho xilliyeed waqti ka waqti, waxay kuxirantahay nooca jaakada.
Staghound-ka Mareykanka ayaa ugu horreyntii ah natiijada Scottish Deerhound iyo Greyhound hiddo-wadaha aan la garanayn boqolkiiba hidde ahaan. Inta badan, Staghound waxaa lagu dhajiyay Staghound ilaa Staghound tan iyo 1800-meeyadii, laakiin ugaarsiga ugu fiican ee iskutallaabta ah eeyaha Greyhound / Deerhound ayaa wali lagu daray taranka. Maaha farac toosan oo daahir ah Scottish Deerhound iskutallaabay iyadoo saafi ah Greyhound . Markii Mareykanku degay, Greyhound, Scottish Deerhound, iyo suurtagalnimadooda iskutallaabtoodu waxay heleen jidkooda Dunida Cusub. Kaabayaasha kala-goynta waxaa loo isticmaali jiray isboorti, cunno iyo dhogor. Markii ugu horreysay abid, coyote waxaa lagu lacnaday eeyaha socda. Eeyaha kooraska ah ayaa loo adeegsaday yeeyda wadamo kale iyo sidoo kale Ameerika, laakiin coyote ayaa caqabad hor leh keentay. Coyote-ka ayaa ka dheereeya yeyda, oo rodolkiisna inta rodol baa loola dagaallamaa sidii yeyda oo kale. Intii lagu gudajiray dejinta iyo fidinta dhanka galbeed waxaa la ogaaday in iskutallaabta udhaxeysa dhaqsaha badan, ganaax-lacageed Greyhound oo ay lajirto Scottish Deerhound oo aad u xoog badan ayaa siiyay xayawaan ganaax fiican oo loo isticmaalo coyote dhul adag. Scottish Deerhound sidoo kale wuxuu ku darsaday jaakaddiisa adag iyo kartida carafta. Staghound waxaa loo soo saaray Staghound waxaana badiyaaaba si khaas ah loogu soo koobay astaamaha u roon raadinta coyote. Dhawr boqol oo jiil oo noocan ah taranka ayaa horseeday waxa dad badani u tixraacaan astaanta muuqaalka coyote-coursing. Asal ahaan, Staghound-ka Mareykanka ayaa dhashay. General George A. Custer wuxuu Staghound u adeegsaday qayb ka mid ah baarkiisa eygiisa oo uu ku baran jiray xayawaano kala duwan oo Waqooyiga Ameerika ah. Staghound wuxuu had iyo jeer ku jiray gacanta ugaarsadayaasha, xaqna uma lahan inuu ku daba galo meesha eyga ordayo Staghound ayaa tagaya bakhtiyey .
Staghound-ka Mareykanka looma aqoonsana inuu yahay nooc, inkasta oo uu ka dheeraa qaar ka mid ah noocyada casriga ah ee la aqoonsan yahay. Had iyo jeer waxaa loo kariyay inay shaqeyso oo aan loo cayimin nooca. Ma jiraan wax jaangooyo noocyo ah, xilliganna ma jiro wax dhaqdhaqaaq ah oo Staghound ku riixaya aqoonsi nooc. Inta badan ugaarsadayaasha ayaa rumeysan in Staghound loo daayo in aan loo aqoonsan inuu yahay isir ahaan sidaa darteed waxaa loo ilaalin doonaa sidii xayawaan isku duuban oo loo soo shaqeeyay oo aan loo muujin.
Kani waa Cruiser. Waxay dhererkeedu yahay 28 inji (73 cm).
Rosa American Staghound barafka
Staghounds waa inay xidhaan muuska nooca dambiisha ah markay ka baxayaan xadhigga (keligood ama xayawaannada kale?) .... Kalidaa, maxaa yeelay ma ogaan doontid goorta eeyga qof kale u soo socdo isagoo ka cararaya meelna ... Xayawaanka kale si fudud maxaa yeelay way daba socon doonaan xitaa eeyaha kale ee ay la nool yihiin.
toy silig muqisho Pit dawaco
Staghound wuxuu saaxiib la noqon karaa bisad, laakiin isla eeygan oo si qanacsan ula seexda bisadda ayaa wali ceyrsan doona oo dili doona bisad ama eyga. Waxay leedahay dareen xoog leh oo lagu eryo laguna dilo waxyaabaha socda. Staghounds micnaheedu maaha markay ceyrsanayaan oo wax dilayaan, laakiin waxay si fudud ula socdaan dareenkooda.
Eeg tusaalooyin badan oo Staghound ah
Sawirada Staghound 1
Macluumaadka waxaa iska leh 'Running Sage Staghounds-Glen Kansanback'
7 bilood jir bulldog american
2 bilood jir dane ah
Terminalka qamadiga lagu qasay baastada
jack russell chihuahua oo isku dhafan madow iyo cadaan
isku darka shey shar pei
ceel dib iyo qas qas
old somali bulldog god qas